Maalinta: Febraayo 10, 2019
Injiilka xaafadda 3 ee Manisa
Waaxda Gaadiidka Dawlada Hoose ee Manisa waxay ka bilaabatay adeega gaadiidka dadweynaha inta udhaxeysa Boyalı, Tepe iyo Yaka Neighborhoods iyo Akhisar ee Gördes. Hüseyin Üstün, Madaxa Waaxda Gaadiidka ee Dawlada Hoose, oo booqday xaafada, [More ...]
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, Kayapa Aasaasiga Aagga Wershadaha ayaa baarey wadada la dhameystiray. Gudoomiyaha Aktaş, balaca mitirka 26 iyo dhererka mitirka 1200 ee wadada gawaarida isticmaala aaga warshadaha [More ...]
Izmir Isuksehirden Car Park
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay sidoo kale dayactireysaa bannaanka hore ee Alsancak Punto Storey Car Park ka dib garoonkii 'Heroes Park'. Muuqaalka cusub ee baarkinka gawaarida, oo leh muuqaal qurxoon oo leh silhouette Izmir, ayaa la qaddariyo. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, Alsancak Punto Storey [More ...]
Barış iyo İpek Şen waa macalin xisaabeed Kand inra, Kocaeli. Lammaanaha, oo loo yaqaan qoyska xiisaha badan ee baaskiilka, oo ay weheliyaan gabadhooda, mid ka mid ah 17 bil kasta iyo da'da kale ee 9 [More ...]
10 Febraayo 1922 News of Tevhid-i Efkâr Wargeyska ...